Wararka - 4 siyaabood oo looga faa'iideysan karo xogta loona adeegsan karo hagaajinta caafimaadka iyo amniga bulshada
QALABKA SOO SAARKA NAASKA
DABKA HOOSE REEL IYO GOLAHA WAKIILADA
VALVE HYDRANT waalka
4 siyaabood oo looga faa'iideysan karo xogta loona adeegsan karo hagaajinta caafimaadka iyo amniga bulshada
Xilligii Bill Gardner uu ku soo biiray adeegga dabka ee markaa miyiga ku yaal Texas, wuxuu yimid isagoo doonaya inuu isbeddel wanaagsan sameeyo. Maanta, isagoo ah hawlgab hawlgab dab damis, dab-demiye tabaruce iyo agaasime sare oo ah alaabooyinka dabka ee ESO, wuxuu u arkaa himilooyinkaas jiilka maanta soo socda iyo kuwa soo socda, sidoo kale. Marka lagu daro wicitaanka inay u adeegaan, waxay keeneen baahi loo qabo in la fahmo sida dadaalkooda ay u saameynayaan hadafka iyo himilooyinka waaxdooda. Waxay rabaan inay ogaadaan saameynta ay sameynayaan, kaliya maahan fulinta shakhsi ahaaneed iyo sheekooyinka geesinimada leh, laakiin qabow, xog adag.
Raadinta xogta dhacdooyinka sida dabka jikada ayaa gacan ka geysan kara dejinta mudnaanta waxbarashada bulshada. (sawirka / Getty)
Waaxyo badan ayaa ururiya macluumaadka ku saabsan dhacdooyinka dabka iyo jawaabaha, dab-demiye iyo waxyeelada dadka rayidka ah, iyo khasaaraha hantida si ay ugu warbixiyaan Nidaamka Ka Warbixinta Dhacdooyinka Dabka Qaranka. Macluumaadkani wuxuu ka caawin karaa inay la socdaan oo ay maareeyaan aaladaha, inay diiwaangeliyaan waxqabadka kala duwan ee waaxda iyo inay caddeeyaan miisaaniyadda. Laakiin iyada oo la ururinaayo xog ka baxsan heerarka NFIRS, wakaaladuhu waxay marin u heli karaan keyd hantiyeed oo ah aragti dhab ah si ay ugu wargaliyaan go'aan qaadashada isla markaana ay uga caawiyaan ilaalinta dab-demiyeyaasha, dadka deegaanka iyo hantida.
Sida laga soo xigtay a 2017 Sahanka Xogta Dabka Qaranka, "xog uruurinta ayaa ka weynaatay xogta dhacdada waxaana loo baahan yahay hanaan dhameystiran oo lagu xirayo dhammaan xogta howlaha dabka si loo hubiyo in waaxyaha dabka ay la shaqeeyaan xog si dhab ah ugu xisaabtanta sawirka buuxa ee howlahooda."
Gardner wuxuu rumeysan yahay in xogta ay soo ururiyeen EMS iyo wakaaladaha dabka ay leeyihiin qiime aad u weyn oo aan weli la faafin.
"Waxaan u maleynayaa in sanado badan, aan helnay macluumaad waxayna ahayd fikirka xumaanta lama huraanka ah in qof kale uu doonayay macluumaadkaas, ama waxaa loo baahday in lagu sameeyo nooc ka mid ah qiilka jiritaankeena," ayuu yiri. "Laakiin dhab ahaantii, waxaa loo baahan yahay in lagu hago waxa ay tahay inaan qabanno oo aan u tilmaamno halka aan aadi lahayn hay'ad walba."
Waa kuwan afar qaab oo dabka iyo hay'adaha EMS ay xogtooda u adeegsan karaan:
1. HALIS QAADASHO
Khatartu waa qayb weyn, iyo in la fahmo khatarta dhabta ah ee bulshada, waaxda dabka waxay u baahan tahay inay uruuriso xog ka caawisa inay ka jawaabaan su'aalaha sida:
Immisa dhisme ayaa ku yaal aag ama beel?
Muxuu dhismaha ka samaysan yahay?
Waa kuwee deganayaasha?
Waa maxay waxyaabaha halista ah ee halkaas ku kaydsan?
Waa maxay biyo siinta dhismahaas?
Waa maxay waqtiga jawaabtu?
Goorma ayay ahayd markii ugu dambeysay ee la kormeero oo xadgudubyada la saxo?
Meeqa sano ayey jiraan dhismayaashaasi?
Immisa ayaa rakibay nidaamyada xakamaynta dabka?
Haysashada xogta noocan ah waxay ka caawineysaa waaxaha qiimeynta halista jirta halkaasoo ay ugu qoondeyn karaan ilaha si waafaqsan isla markaana mudnaanta u siin karaan xeeladaha yareynta, oo ay ku jiraan waxbarashada bulshada.
Tusaale ahaan, xogta ayaa laga yaabaa inay muujiso in 100 warbixinno dabeed qaab dhismeedka sanadkiiba, 20 ka mid ahi ay yihiin dabka shaqeeya - 20 ka mid ahna, 12 ay yihiin dabka guryaha ka dhaca. Dabka gudahiisa ka dhaca, sideed ka bilow jikada. Haysashada xogtan kooban waxay ka caawineysaa waaxaha eber ka hortagga dabka jikada, taas oo u badan tahay inay xisaabtamaan inta badan qasaaraha dabka ee bulshada.
Tani waxay gacan ka geysan doontaa in la caddeeyo kharashka loo adeegsado qaboojiye dabka loo adeegsado waxbarashada bulshada iyo, tan ka sii muhiimsan, waxbarashada bulshada ayaa si weyn u yareyn doonta halista dabka jikada.
"Haddii aad bulshada wax u baraysid sida iyo goorta loo isticmaalo dab-bakhtiiye," ayuu yiri Gardner, "taasi waxay, dhankeeda, gebi ahaanba beddeli doontaa dhammaan halista iyo qiimaha la xiriira ee bulshadaada."
2. HORUMARINTA AMMAANKA DAB-DHEXE
Aruurinta xogta dhismaha ee ku saabsan dabka qaab dhismeedku kaliya kuma caawinayo nabadgelyada dab-demiska iyadoo la ogeysiinayo shaqaalaha haddii ay jiraan waxyaabo khatar ah oo ku keydsan goobta, waxay sidoo kale ka caawin kartaa dab-demiyeyaashu inay fahmaan soo-gaadhista kansarka.
“Maalin kasta, dab-demiyeyaashu waxay ka jawaabaan dabka bixiya walxaha aan ognahay inay kansar leeyihiin. Waxaan kaloo ognahay in dab-demiyeyaashu ay boqolkiiba ka badan yihiin noocyada kansarka qaarkood marka loo eego tirada guud, ayuu yidhi Gardner. Xogta ayaa naga caawisay inaan isku xirno heerka kororka kansarka ee soo-gaadhista alaabtan.
Uruurinta xogtaas dab-demiye kasta waa muhiim si loo hubiyo in dab-demiyeyaashu ay haystaan ​​aaladaha ay u baahan yihiin si ay u yareeyaan soo-gaadhista iyo sunta sunta ah, iyo sidoo kale inay wax ka qabtaan baahiyaha daryeelka caafimaad ee mustaqbalka ee la xidhiidha soo-gaadhista.
3. BUUXINTA Baahida ay qabaan dastuuradooda
Xaaladaha degdega ah ee sonkorowga waa sabab guud oo wicitaanada EMS. Hay'adaha leh barnaamijka bulshada ee kaaliyaha caafimaadka, booqashada bukaan-sokorowga qaba wuxuu u fidin karaa faa'iidooyin ka baxsan xallinta dhibaatada cudurka macaanka ee degdegga ah. Hubinta in bukaanku haysto cunto ama uu ku xiran yahay ilaha sida Cuntada Lugaha - iyo inay heystaan ​​dawooyinkooda oo ay yaqaanaan sida loo isticmaalo - waa waqti iyo lacag si fiican loo qaatay.
Caawinta bukaanka inuu maareeyo cudurka macaanka waxay kaloo ka hortagi kartaa safaro badan oo uu ku tagi karo qolka gargaarka deg-degga ah wuxuuna ka caawin karaa bukaanku inuu ka fogaado baahida loo qabo kaadi-sifeynta iyo kharashaadka iyo saamaynta nololeed ee la xiriirta
- Waxaan diiwaangelineynaa inaan kubixinay dhowr kun oo doolar barnaamijka caafimaadka bulshada iyo inaan badbaadinay boqolaal kun oo doolar daryeelka caafimaadka, ayuu yiri Gardner. “Laakiin ka sii muhiimsan, waxaan muujin karnaa inaan saameyn ku yeelanay nolosha qof iyo nolosha qoyskiisa. Waa muhiim in la muujiyo inaan isbeddel sameyno. ”
4. U SHEEGTA SHEEKADDA WAKIILKAAGA
Aruurinta iyo falanqaynta EMS iyo xogta wakaalada dabka waxay kuu ogolaaneysaa inaad si sahal ah uga warbixiso NFIRS, qiil u bixiso kharashaadka ama aad qoondeyso ilo, sidoo kale waxay muhiim u tahay sheegida sheeko hay'ad. Muujinta saameynta ay hay'addu ku leedahay bulshada, ujeedooyin dibadeed sida maalgelinta deeqda iyo qoondeynta miisaaniyadda, iyo gudaha oo la muujiyo dab-demiyeyaasha in ay isbeddel ku sameynayaan bulshada ayaa ah waxa u kaxeyn doona hay'adaha heerka xiga.
- Waxaan u baahanahay inaan karno xogta dhacdada oo aan nidhaahno halkan inta wicitaan ee nala soo diro, laakiin tan ka sii muhiimsan, waa tan tirada dadka ka soo jeeda dhacdooyinkaas aan caawinnay, ayuu yidhi Gardner. "Waatan tirada dadka ku nool beesheena, waqtigooda ugu nugul, waxaan u joognay inaan wax ka badalno iyaga, waana awoodnay inaan bulshada ku dhex haysano."
Sida qalabka xog ururinta waxay u xuub siibtaan labada adeeg ee fudud iyo mid casriyeysan jiil cusubna wuxuu galaa adeegga dabka oo horeyba u fahamsanaa helitaanka sahlan ee xogta, waaxyaha dabka ee ka faa'iideysanaya awoodda xogtooda waxay lahaan doonaan aragtiyo ay ugu baahan yihiin inay ku gaaraan go'aanno wanaagsan iyo ku qanacsanaanta ogaanshaha saamaynta ay ku yeesheen.
Warshadda Qalabka Dabka Dunida Yuyao